musha AFRAN FOOTBALL STORI Ghanian Nhabvu Vatambi Jordani Ayew Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius nezita rezita rokuti "Jo". Yedu yeJodhani Ayew Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekusimuka kweJoridhani Ayew. Mufananidzo Credits: Instagram, Twitter uye PremierLeague.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake yakapusa gameplay uye kugona kubata kumanikidza. Nekudaro, vanhu vashoma chete ndivo vanoona shanduro yedu yeJodhani Ayew's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Kutanga kubva, Jordan Pierre Ayew akazvarwa musi wegumi nemana waGunyana 11 pagurukota reMarseille muFrance. Ndiye wechitatu pavana vana akazvarwa kuna amai vake, Maha Ayew uye kuna baba vake, Abedi Pele (mutambi wenhabvu wenhabvu panguva iyoyo).
Jordan Ayew vabereki vaAedi naMaha. Mufananidzo Credits: HappyGhana uye Wikipedia.
Ghanian uye French nyika yemadzinza vatema vane mabviro emhuri yeAfrica kwakatangiswa vakarererwa mumhuri yepakati mhuri kurongedza kuGhana kwaakakurira pamwe nemunun'una wake Andre Ayew uye mudiki mukoma Imani Ayew.
“Ndakarerwa nasekuru nasekuru vekuGhana nekuti amai vangu uye mukoma wababa vangu aAdward Ayew vaifamba nababa vangu chero kwavaienda kunoenderana nezvinodiwa zvebasa rake renhabvu. Pakanga pasvika mazuva ekupedzisira ebasa rababa vangu ini ndakabvumidzwa kumutevera ”.
Akayeuka Joridhani nezvekurerwa kwake.
Jordan Ayew akarererwa kuGhana mumakore ake ekuumbwa. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Nekudaro, zvaingova zvechisikigo kuti mudiki Ayew akakurira achiona Nhabvu Mitambo terevhizheni kuti awane mufananidzo wezvekuita kwababa vake pabasa. Ari kure nekuona mitambo, Ayew akasikwa kuti atambe nhabvu nemunun'una wake neshamwari pasina kumanikidzwa kutora mutambo zvakanyanya kana kurota kuti ave mutambi wenhabvu akaita sababa vake.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Pakazosvika nguva Ayew ave nemakore 9, rudo rwake chairwo rwemutambo wenhabvu rwakanga ruchizivikanwa kuna baba vake avo - nekuda kweanosvika gumi ramakore basa muFrance - yakafambisa kupinda kweyechidiki kuenda kuLyon-Duchère's youth academy.
Jordan Ayew aive nemakore 9 paakatanga basa rake rekuvaka kuLyon-Duchère '. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Yakanga iri paYunivhesiti yevechidiki kana yevakomana kirabhu iyo Ayew akapedza makore matanhatu achidzidzira hunyanzvi, achiremekedza tekinoroji yake nekumonera mabhutsu ake akagadzirira kuita basa raaisamboziva kuti raizomutora nzvimbo kutanga kuMarseille.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Ayew aingova mukomana wemakore gumi nematatu apo kutama kuenda kuMarseille vechidiki masisitimu kwakauya kugogodza pamasuo ake. Kunyangwe Marseille aine mutemo wemaimiriri uyo waida kuti vatambi vadiki vatendeuke gumi neshanu vasati vapinda chikoro chavo, iyo nhabvu yekuFrance yakaruma yavo mirawo kuti vaputse ruva rinopisa uye vakamutarisa nekufara vachimuona achisimuka.
Kukwira kuburikidza nemazita: Mufananidzo usingawanzo weJoridhani Ayew paMarseille. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter.
Mutambi wenhabvu akazoita kuti akwezve mukombe wetsiva wekutanga paakasaina chibvumirano chake chekutanga naMarseille mugore ra2009. Akaenderera mberi nekuita kuti kirabhu yake ive mukuedzwa kwekukanganisa uko kwakabatsira Marseille kunyora 2-1 Ligue 1 kukunda Lorient on the 16th of December 2009.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Hapana kuramba chinhu chekuti Ayew akange aine nzvimbo dzakawandisa kuMarseille uye akagara zvakanaka paakakweretwa kuSoshaux. Uyezve haana kuwanikwa achishomeka paakange aine gore rimwe chete rekunyora neLorient mumwaka wegore ra2014 kusvika2015.
Pashure pazvo, Ayew akaiswa zvishoma nezvishoma mugomba rakadzika-dzika nematambudziko ehunyanzvi paakabatana neAston Villa asi akatadza kubatsira iro reChirungu kuti risadzvinyirira. Kunyange aisakwanisa kutsanangura kuti sei Swansea guta rakatambura nekusiyana kwegore mushure mekujoinha kirabhu.
Swansea yakanyura mukusiiwa haina kutaura zvakanaka nezvevakarova mukirabhu kusanganisira Ayew. Mufananidzo Wekadhi: Mirror.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Iyo yekumberi yakazowana zvikonzero zvekunyemwerera paakabatana neCrystal Palace pachikwereti chemwaka wa 2018-19 ndokupa The Glaziers zvikonzero zvinogutsa zvekuti aive mutambi wavanoda uye wavakakodzera. Nekuda kweizvozvo, hazvina kushamisa apo iyo kirabhu yakazivisa kuti yakanga yawana saini yaAyew yekutengesa makore matatu musi wa25 Chikunguru 2019.
Jordan Ayew akasaina chibvumirano chemakore matatu neCrystal Palace musi wa25 Chikunguru 2019. Mufananidzo weChipo: Instagram.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora, Ayew awana nzvimbo yake pakati peCrystal castle vakarova vakanyanya sezvinoonekwa mukupenya kwake bhora kubata uye penchant yekupa vanodzivirira zero nguva pabhora. Chiizve? mafeni ari kutanga kudziya kusvika kuAyew sezvo vachinyatsoziva kuti zero player yeiyo hero kusvika pakukwira yakatorwa kubva mukutsungirira kwake kuita zvakanakira kirabhu. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Kure kure nebasa raAyew rekufema-basa, zviitiko muhupenyu hwake hwerudo zvakatanga kugadzirwa misoro muna 2015 paakanzi aiwirirana murudo nemumwe Amanda anozivikanwa semukadzi wemurume wake weGhanian - Afriyie Acquah. Kunetsana kwakawedzera apo mumwe munhu airehwa audiotape anobva kuAmada, akaita kuti areurure kuti aive musikana waAyew, anoda uye anoda kunge mukadzi.
Jordan Ayew anonzi ari kudanana nemurume weAfriyie Acquah mukadzi waAmanda. Mufananidzo Chikwereti: DailyStar.
Kunyangwe Ayew ari - panguva yekunyora - akaroora musikana wake akanaka akatendeuka mukadzi Denise, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve apo vaviri vacho pavakatanga kufambidzana kana kufamba pasi munzira. Wokuroora wakaroora naDenise wakakomborerwa nevana vaviri. Vanosanganisira mwanasikana wechidiki anozivikanwa nemwanakomana mudiki.
Jordan Ayew nemukadzi wake Denise uye nevana vanoyevedza. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Funga nezve vashoma venhabvu vatambi vanoverenga mhuri yavo semaropafadzo, funga nezveJoridhani Ayew uye kufungidzira kuburikidza nezvokwadi nezve nhengo dzemhuri yemuridzi anotanga nevabereki vake vane rudo.
Nezve baba vaJordani Ayew: Abedi Ayew ndibaba vaJoridhani. Iye akazvarwa musi wa5 waNovember 1964 uye akashanda nhabvu nhabvu nhabvu yenzvimbo iri nani yehupenyu hwekutanga hwaJoridhani. Ivo baba ve4 ndi - panguva yekunyora - mutungamiri mukuru uye mutungamiri weGhana nyanzvi yenhabvu nhabvu Nania FC. Kunyangwe semuenzaniso wakakwana wababa, Abedi ari padyo nevana vake kunyanya vanakomana vake vatatu vaakadzidzisa kuti vave vatambi venhabvu venhabvu.
Mufananidzo unokanda weJorodhani Ayew nababa vake Abedi Pele. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
About Jordan Ayew amai va: Maha Ayew ndiamai vaJoridhani. Semurume wake, Maha ndeweWest Africa mhuri yemhuri. Kunyangwe Maha ari director uye mudhara weiyo Nania Nhabvu Nhabvu, anogadzira nguva yekuve nevana vake vaakabatsira kurera. Iye zvakare anodada nezvavakakura kuti vazove uye uye haamboregi kuvapa chikwereti chake.
Jordan Ayew amai vake nemunun'una wake Andre. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
About Jordan Ayew's siblings: Jordan ane sekuru vakura wedangwe-hama inozivikanwa saAbuel Ayew pamwe nevanun'una vaviri vanozivikanwa saAndrew Ayew naImani Ayew. SaJordani, Ibrahim inyanzvi yevatambi venhabvu. Anotamba kuEuropeopa FC svikiro rinodzivirira.
Jordan Ayew mukoma waAbrahama. Mufananidzo Wemifananidzo: Facebook.
Paari, Andre ndiyewo mutambi wenhabvu anoteedzera kutengeserana kwake kuSwansea City panguva yekunyora. Hama dzese dziri padyo nepedyo uye dzinogovana rudo rwakaenzana nasisi wavo mumwechete Imani uyo ari fashoni yemafashoni.
Jordan Ayew pamwe nemukoma wake Imani uye mukoma Andre. Mufananidzo weKwereti: Kubilive.
About Jordan Ayew hama: Kuenderera mberi kweJorodhani hupenyu hwehupenyu hwemhuri, zvishoma zvinozivikanwa pamusoro pehama yake kunyanya sekuru vake amai nasekuru nasekuru nasekuru. Ane babamunini vanozivikanwa savaimbove nyanzvi yebhora nhabvu - Kwame Ayew pamwe nemunun'una anonzi Inaya Ayew. Iko hakuna zvinyorwa zviripo zveanatete naambuya ivo muzukuru wavo achiri kuwanikwa panguva yekunyora iyi biography.
Jordan Ayew babamunini Kwame. Mufananidzo Wekodhi: Wikipedia.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Unhu hunhu hunotsanangura Jordan Ayew ndehweVirgo zodiac zviratidzo. Zvinosanganisira kugona kwake kushanda nesimba, rupo uye kuva netariro. Pamusoro pezvo, ane munhu anosetsa uye haanyatso kuburitsa zvinhu zvine chekuita nehupenyu hwake hwega uye hwepachivande.
Pamusoro pezvido zveAyew uye zvekuita, ane zviitiko zvinoverengeka zvemafaro zvinosanganisira kuteerera mimhanzi, kuona mafirimu, kufamba, kuona pamwe nekushandisa nguva nemhuri yake inodakadza uye shamwari.
Kuona ndeimwe yeJodhani Ayew kufarira uye kuita zvemitambo. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Unoziva here kuti Jordan Ayew ine mari inofungidzirwa inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora panguva yekunyora iyi bio. Nzvimbo dzekupfuma kwake kuri kuwedzera dzinobva pamubhadharo nemiripo yaanotambira yekutamba nhabvu yepamusoro apo ongororo yemashandisiro ake inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kunongedzera zvinongedzo kuupenyu hwaAyew hwomutambarakede zvinosanganisira akasiyana mithunzi yemotokari dzinodhura dzaanoshandisa kufamba mumugwagwa weLondon neGhana. Pamusoro pezvo, munhu anorova ane imba shoma inozivikanwa inodhura kuGhana uye anogara kune imwe imba yepamusoro muLondon.
Jordan Ayew achikotamira padivi pemota yake yeMercedes. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Jordani Ayew Nyaya Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Unoziva sei Jordan Ayew kupfuura nyaya yehudiki uye chii chakanyorwa pamusoro pake mune iyi bio? Gara kumashure sezvo Tichiratidzira mashoma-anozivikanwa kana asina kutaurwa chokwadi pamusoro peakarova.
CHITENDERO: Ayew muMuslim anoshanda uyo akakura pachinamato. Kunyangwe iye mukwikwidzi asingaende zvekunamata panguva yekubvunzurudzwa, mhemberero dzechinangwa chake dzinopa kuremekedza kwake Mwari uye kuzvipira kuIslam.
Jordan Ayew muMuslim anodzidzira. Mufananidzo Wemifananidzo: Fypfanzine.
KUSVIRA UYE KUSVIRA: Anoridza murwi nhabvu anotamba mumutambo wetsiva dzetsiva uyo asingasvuti uye kumwa panguva yekunyora. Zvikonzero, nei Ayew anotsika dzakadaro hutano nzira, ndeyekuti ave nechokwadi chekuti muviri unogara uri mushe zvakakwana kuti ubate zvinodikanwa zvebhiza-yepamusoro nhabvu.
Nezvawo: Jordan Ayew anoda ma tattoos uye ane hunyanzvi hwemuviri hwakanyorwa pamaoko maviri kuruboshwe uye kurudyi. Zvinotendwa kuti munhu anorova - ane hurefu hwemamita matanhatu, 6 inches - haana mamwe matatto kupfuura iwaya ari pamaoko ake nekuti anga asati abatwa zvisina musoro.
Unogona here kuona ma tattoos ari kuJorodhani Ayew kuruboshwe uye maoko orudyi? Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu yeJordani Ayew yeUdiki Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Aston Villa Nhabvu Diary
Kevin-Prince Boateng Childhood Nyaya Yekuwedzera Plus Untold Biography Facts
Michael Essien Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts